ရွှံ့နွံယိုစိမ့်စက်များအတွက်ခါးပတ် filter ကိုနှိပ်ပါ China Manufacturer
သတ္တုတွင်းများအတွက် filter,Gypsum Desulphurization စနစ်,အထည်အလိပ်စွန့်ပစ်ရေစွန့်ပစ်ရေစစ်စက် Filter Press
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: သတ္တုတွင်းများအတွက် filter,Gypsum Desulphurization စနစ်,အထည်အလိပ်စွန့်ပစ်ရေစွန့်ပစ်ရေစစ်စက် Filter Press
Home > ထုတ်ကုန်များ > filter စာနယ်ဇင်း > ကုန်သည်ကြီးများအသင်း Filter ကိုစာနယ်ဇင်း > ရွှံ့နွံယိုစိမ့်စက်များအတွက်ခါးပတ် filter ကိုနှိပ်ပါ
 ရွှံ့နွံယိုစိမ့်စက်များအတွက်ခါးပတ် filter ကိုနှိပ်ပါ
ရွှံ့နွံစာနယ်ဇင်း filter ကို၏အားသာချက်များ
ရွှံ့နွံအခြောက်ခံခြင်းသည်ရွှံ့နွံများကိုကုသရာတွင်အဓိကအဆင့်ဖြစ်သည်။ ရွှံ့ကိတ်မုန့်၏အစိုဓာတ်များပါဝင်မှုနည်းပါးပါကအလွန်ကောင်းသောလျှော့ချမှုရရှိရန်အတွက်အသံပမာဏများစွာကျဆင်းသွားရုံမကရွှံ့နွံကိုတိုက်ရိုက်ကုသနိုင်သည်။ နှစ်ကြိမ်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်ကို ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ရွှံ့နွံအခြောက်ခံခြင်းများကိုသိမ်းဆည်းပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်နှင့်ရွှံ့နွံကိတ်မုန့်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေသည်။ ရွှံ့စေးစစ်ထုတ်စက်သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ရွှံ့နွံများကိုသန့်စင်သောစျေးကွက်တွင်အဓိကကျသောရွှံ့နွံများကုသသည့်စက်ကိရိယာဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်အနည်အနှစ်များသန့်စင်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်းစီမံကိန်းများသည်ရေခန်းခြောက်စေရန်အတွက်ရွှံ့စေးစစ်ထုတ်စက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိရွှံ့နွံ filter ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ရွှံ့နွံကုသမှု၏နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ နောက်တစ်ခုကရွှံ့နွံစစ်စက်၏အားသာချက်များကိုသင့်အားမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
1, ရွှံ့နွံစာနယ်ဇင်း၏မြင့်မားသောဖိအား။ အတိတ်ကာလတွင် filter press မ်ားမှရွှံ့နွံများအနည်ကျစေသောရေပမာဏသည် ၅၀% အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ အများစုမှာ ၆၀% မှ ၈၀% အတွင်းရှိပြီး၊ ရွှံ့နွံဖိအားစစ်ထုတ်စက်များသည် ၁၅% မှ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိကုန်ဆုံးသွားသည်။ သေးငယ်ပိုမို filtrate နှင့်ပိုပြီးအရင်းအမြစ်များကို။
၂။ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း၏ထိရောက်မှုသည်မြင့်မားသည်။ ရွှံ့နွံများကုသမှုစက်ဝိုင်းမှာမိနစ် ၄၀ အောက်သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ရေငန်ရည်အားလုံးသည်ပုံမှန်စစ်ထုတ်စက်ထက် ၃၀% ပိုမိုမြင့်မားသည်။
3. အလိုအလျောက်၏ဒီဂရီမြင့်မားသည်။ အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်စီးရီးရွှံ့နွံ filter ကိုသော့တစ်ခုထိန်းချုပ်မှုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ကြီးမားသောရွှံ့နွံကုသမှုစီမံကိန်းအတွက်ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှုကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အများအပြားကရွှံ့နွံစာနယ်ဇင်း filter များဝန်ထမ်းတစ် ဦး တည်းသာကစီမံခန့်ခွဲနေကြသည်။
၄။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရွှံ့နွံစစ်ထုတ်စက်၏ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေသောကြောင့်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်သောကြောင့်ရွှံ့နွံ filter ကို နှိပ်၍ လည်ပတ်နေစေပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်။ တူညီသောရွှံ့နွံတစ်ခုအတွက်ရွှံ့နွံစစ်ထုတ်စက်၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်သာမန် filter press ထက်သုံးပုံတစ်ပုံလျော့နည်းသည်။ ထို့ကြောင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်သည့်လုပ်ငန်းများ၏စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
5. ပြည့်စုံသောစွမ်းဆောင်ရည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်။ ရွှံ့စေးစစ်ထုတ်စက်၏ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်းတွင်၊ filter press ထုတ်လုပ်သူများသည်အလွန်အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးအကောင်းဆုံးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းကိုထိန်းချုပ်သည်၊ စက်တစ်ခုလုံး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအလွန်နည်းသောပျက်ကွက်မှုနှုန်းသို့ရောက်ရှိသည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: သတ္တုတွင်းများအတွက် filter , Gypsum Desulphurization စနစ် , အထည်အလိပ်စွန့်ပစ်ရေစွန့်ပစ်ရေစစ်စက် Filter Press , သတ္တုတွင်းများအတွက်လေဟာနယ်ခါးပတ် filter ကို , သတ္တုဗေဒပြားနှင့် Frame Filter Press , ပြည်တွင်းစစ်အိတ်အိတ် , သတ္တုတွင်းပူမီးဖိုကောက်ခံရေး , စာနယ်ဇင်းရေခန်းခြောက်